Karatra ho an'ny fampandrosoana zaza
Ny ray aman-dreny tanora rehetra dia mikarakara ny fampandrosoana ara-batana sy ara-tsaina ny zaza vao teraka ary manahy ny hanaraka ny namany. Noho izany, ny zaza dia mila manokana fotoana be dia be ary mifanakalo matetika izany amin'ny fomba samihafa.
Ankehitriny, ny reny sy ny dadany dia tsy afaka mamorona zavatra tsy miankina, fa ampiasao ny iray amin'ireo fomba maro amin'ny fampandrosoana vao haingana, indrindra fa ny dokotera mpitsabo, ny dokotera ary ny mpanabe. Afaka manana endrika isan-karazany izy ireo, fa ny karazana mora indrindra ho an'ny ankizy dia karatra fampandrosoana, izay ahafantaran'ny zazalahy sy ny zazavavy vaovao vaovao ho an'ny tenany amin'ny fotoana fohy.
Ny karatra toy izany ho an'ny fampandrosoana ilay zaza dia ampiasaina amin'ny asan'ny manampahaizana manokana vahiny sy vahiny. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay hoe ny rafi-pampandrosoana fampandrosoana dia mampiasa maso an'io karazana io, ary ny fomba ampiasan'izy ireo ny zaza.
Ny fomba fiasa Glen Doman
Ny karatra malaza indrindra amin'ny fampandrosoana ny zaza hatramin'ny fahaterahana dia novolavolan'ny American neurosurgeon Glen Doman. Ny fomba fiasan'izy io dia mifototra amin'ny fitsipika fa ny ankizy dia manomboka mahita ny tontolo manodidina azy miaraka amin'ny fanampian'ny mpandinika sy maso maso.
Ao amin'ny karatra rehetra ao amin'ny Glen Doman ho an'ny fampandrosoana zaza iray taona iray amin'ny litera mena lehibe dia mamoaka teny manan-danja manokana ho azy - "mama", "dadan'ny", "saka", "papango" sy ny sisa. Amin'ny alalan'ireo teny tsotra ireo dia manolo-kevitra ny hanomboka ny fiofanana. Ny teny rehetra naseho tamin'ny ankizy dia zaraina ho sokajy maromaro - legioma, voankazo, sakafo, biby ary ny sisa.
Ireo ankizy efa zokinjokiny dia efa mila maneho karatra izay tsy mampiseho afa-tsy teny, fa koa sary. Ny fampiasana ny tombontsoa azo avy amin'io karazana io amin'ny lesona misy sombiny dia tsy voatery intsony amin'ny valin-kafatra ara-pihetseham-po, toy ny tamin'ny tranga teo aloha, fa tamin'ny fampivelarana ny fomba fisainana.
Ny fampiharana isan'andro amin'ny karatra dia mampifandray fifandraisana mazava eo amin'ny teny sy ny sary, izay, araka ny neurosurgeon, dia mampiroborobo ny fifindrana mivaingana mankany amin'ny famakiana manaraka. Ny zaza, na dia mbola kely aza, dia mianatra avy hatrany ny teny mahazatra, fa tsy ny litera tsirairay, araka ny soso-kevitr'ireo manampahaizana hafa.
Ankoatra izany, i Glen Doman dia mirakitra ny saina sy ny isa. Mino izy fa mora kokoa amin'ny ankizy ny mahita sary tsy misy dikany izay tsy midika na inona na inona ho azy, fa marika maromaro maromaro. Izany no antony ampiasaina amin'ny fampiofanana ny kaonty amin'ny fomba fampiasana azy, ampiasaina amin'ny fampiasana sary amin'ny teboka mena amin'ny ampahany aminy.
Ny karatra Glen Doman dia natao hamolavolana lahateny, fahatsiarovan-tena, hevitra ara-tsaina sy ara-tsaina ary ara-tsaina, ara-tsaina sy ara-tsaina. Ny fitaovana hita maso dia mangataka fitarihana amin'ny ray aman-dreny tanora, noho izany dia sarotra be ny ao amin'ny mpivarotra boky sy fivarotana ankizy. Ao anatin'izany dia tsy misy zavatra tokony hatahorana, satria ny karatra ho an'ny fampandrosoana ilay zaza dia azo atao amin'ny tanany manokana, amin'ny alalan'ny fanontana azy amin'ny taratasy matevina eo amin'ny mpanonta loko iray. Ny antontan-taratasy ilaina ho an'ity dia mora hita amin'ny Internet.
Misy fomba hafa entina hampivelatra fahatsiarovana sy fahaiza-manao hafa ho an'ny ankizy, izay ampiasaina amin'ny karatra manokana:
Fomba "loko 100" - karajia karakaraky ny zaza tsy hiteraka.
"Skylark Anglisy" - teknika amin'ny fampiasana sombiny amin'ny teny Anglisy hatramin'ny famoahana ny teny voalohany hatramin'ny 6-7 taona.
"Iza na inona no tsy mahafa-po?" - karatra ho an'ny fampandrosoana ny zaza iray amin'ny 2-3 taona sy ny hafa.
Amigurumi crochet kilalao
Ahoana ny fomba hananana Snow Maiden?
Ahoana ny fomba ampianarana ny zaza amin'ny fitondrana?
Mampiaraka ilay zaza amin'ny vilany iray
Matahotra ny hilomano ny ankizy
Ny famokarana amin'ny voam-bary amin'ny tanany
Fampianarana ara-panahy sy ara-tsaina ho an'ny mpianatra
Tambolena amin'ny tanana manokana
Vavaka ho an'ny zaza
Loko tsara tarehy na plastika?
Anti-allergique fanafody ho an'ny ankizy
Zaka manitra ho an'ny ankizy
Ny fitsaboana ny pancreatitis amin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny no mahomby indrindra
Sarimihetsika ho an'ny trano fonenana
Ireo ankizy azo antoka any Los Angeles dia nanangona kintana maro
Tavoahangy amin'ny taratasy amin'ny tananao
Fanampiana mahomby hanadiovana ny vavony